Barnaamijka Waxay ila tahay - BBC Somali
Barnaamijka Waxay ila tahay
28 Maarso 2014
Howlgalka ay hogaaminayso AMISOM ayna ka mid yihiin ciidamada dowladda ee ilaa toban magaalo looga qabsaday Xarakada al-Shabab, waa howlgal noocee ah?Howlgalka, ayaa ugu yaraan sadex jiho ciidamada xulufadu ay ka wareerayeen al-Shabab. Dhinaca koonfur galbeed oo al-Shabab waxaa al-Shabab laga saaray dhowr magaalo ay ka mid yihiin Xudur, Waajid, Rabdhure iyo qaar kale.Degmada Qoryooleey sadex jeer ayay ku dagaalameen balse ugu dambayntii waa laga qabsaday.Gobolada dhexe Buuloburte oo ay goobaha ay ugu xoogga badan yihiin iyo Ceelbuur ayaa laga qabsaday.Iyadoo la eegayo sida al-Shabaab u lumisay magaalooyinkan ay maamuli jirtay ma la dhihi karaa, waa bilowgii dhamaadka al-Shabaab?Mise al-Shabaab way soo rogaal celin doontaa sida horayba u dhacday, maadaama inta badan ay ka baxeen magaalooyinka iyadoo ciidan iyo hub ahaan is haysata?Xalku ma yahay in xoog kaliya la adeegsado mise xeeladna waa loo baahan yahay sida awood dabsan ha ahaato wadaxaajood ama in awoodda wax laga siiyo?Hogaanka howlgalada waxaa iska leh ciidamada AMISOM, muxuu yahay doorka kuwa dowladda federaalka? Ma wuxuu ku eg yahay mid taageero ah mise kaalin muuqata ayay leeyihiin? Hadii uusan garsiisnayn sidii la rabay maxay tahay in laga badalo?Maxay tallaabo ah ayay dowladdu qaaday si loo xaqiijiyo amnigaWhat is the Somali government doing to ensure security in the areas it captured? Etc:Martida barnaamijka ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah:Prof Cabdi Ismaaciil Samatar, Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre Abaanduulaha ciidamada dowladda Soomaaliya: General Cabdirisaaq Khaliif Dr Cabdiwahaab Cabdi-SamadWaxaa aan meesha ka maqnayn aragtida dhagaystayaasha dunida oo dhan oo kaga qaybgalay cod, qoraal iyo facebook.
Rio 2016: Ciyaaryahanad reer Mauritius oo tartanka ka qaybgashay iyadoo karsar qabta
Xiritaanka ciyaaraha olimbiga ee Rio 2016
Farshaxanka wayn ee reer Ghana Mohammed Awudu oo baraya farshaxan caruurta
Shah Rukh Khan oo lagu joojiyo Mareykanka
Zambia oo qabanaysa doorasho 11 August
Daawo: Shilka diyaaradda Emirates airline ee garoonka Dubai